Calculator ကို Vault: App ကို Hider - Apps ကပ Hide | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Calculator ကို Vault: App ကို Hider - Apps ကပ Hide
Calculator ကို Vault: App ကို Hider - Apps ကပ APK ကို Hide
Calculator ကို Vault ဝှက်ထား applications များ၏အားသာချက်:
-Notice ဘားသတင်းအချက်အလက်အကြံပေးချက်များ, သာစံဂဏန်းတွက်စက်ရဲ့ icon ကိုပြသ
ဖုန်းကို system setting များကို -Check, လျှောက်လွှာ name ကို Calculator ကို + (မပလီကေးရှင်း hider) ဖြစ်ပါသည်
-When မကြာသေးမီ apps များစစ်ဆေးခြင်း, app ကိုနာမတျောကို Calculator ကို Vault သင်သည်မည်သည့် app ကိုဖုံးကွယ်ထားရန်ကူညီပေးနိုင်သည် Calculator ကို Vault (မပလီကေးရှင်း hider) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအက hidden ရုပ်ပုံ function ကိုထောက်ပံ့ပေး, သင့်ဓာတ်ပုံများကိုပြခန်းသို့တင်သွင်း, အခြားသူများကဤ photos.You အတွက်ကာကွယ်ထားဓါတ်ပုံတွေကို browse နိုင်ပါတယ်မမြင်နိုင် apps.You Calculator ကို Vault အတွက်ဝှက်ထားသော app များကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်သင့် phone.Also Calculator ကို Vault ၏ interface ကိုလို့ရပါတယ်ပုန်းအောင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ privacy ကိုစောင့်ရှောက် hider ရဲ့ပြခန်း။
1.Hide အားလုံး installed applications များ (ဘယ်သူမျှမက ROOT ရယူ)
2.Password ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်, စကားဝှက်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်)
မိုဘိုင်းဖုန်းများ (လွယ်ကူလမ်းဝှက် apps များ) ပေါ်တွင်အသုံးပြုမဆို applications များပုန်းအောင်း 3.Supports
4.Hidden app ကိုလည်းဖုန်းအတွက်အဓိက interface ကိုအသုံးပြုယင်း Calculator ကို Vault တွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စကားဝှက် Calculator ကို Vault မသုံးလို့ရပါတယ်မသိကြပါလျှင်, app ကိုဖွင့်စံဂဏန်းတွက်စက် 5.Open ။
6.Hide အသိပေးချက်များ,3mode မှာအကြောင်းကြားစာအားလုံး / ရုံအရေအတွက် / အဘယ်သူမျှမပေး
မကြာမီထဲက 7.Hide apps များ
ဓါတ်ပုံ / ရုပ်ပုံများကိုဖုံးကွယ်ဖို့ 8.Gallery Module (အခြားသူများကသူတို့ကိုရှာတွေ့ကိုရှောင်ရှား, သင့်လျှို့ဝှက်ချက်ဓါတ်ပုံ / ရုပ်ပုံများကိုကာကွယ်ပါ)
ကင်မရာ hiden မှ 9.Add ဖြတ်လမ်း (built-in ကင်မရာပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံကိုယူဖို့အတွက် hider ရဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်)
Calculator ကို Vault သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
start တစ်ခုသို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြည်နယ်မှပထမဦးဆုံးအကြိမ်, pin ကိုပု Calculator ကို Vault.Open စကားဝှက်ကိုတင်ထားရန်လျှောက်လွှာဝင်နိုင်ပါတယ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ထိုအခါသင်က hidden app ကို အသုံးပြု. စတင်နိုင်ပါသည်။
Calculator ကို Vault မှဓာတ်ပုံများဖုံးကွယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ created ပုဂ္ဂလိကဖိုင်သို့ပုံတင်သွင်းဖို့ save button ကို click နှိပ်ပြီးတော့, ဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးရန်နှင့်ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓာတ်ပုံများရွေးဖို့ '' input ကိုဖိုင်တွဲအမည် '' add, ကို 'ပြခန်း Module' 'ကိုအသုံးပြုဖို့ app ကို hider interface ကိုပြခန်းအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Calculator ကို Vault မှ app ကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဝှက်ထားသော display ကို interface ကိုကလစ်အတွက် app ကိုခလုတ် add, သငျသညျ, လျှောက်လွှာအတွင်းဖုန်းကိုမြင် Calculator ကို Vault-App ကို Hider မှထည့်သွင်းဖို့ app ကို select လုပ်ပါ, သွင်းကုန် apps များ button ကို click နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
Calculator ကို Vault မှ apps များပယ်ဖျက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဝှက်ထားသော app များကိုများတွင်ရှည်လျားစာနယ်ဇင်းဝှက်ထားသော app ကို interface က hidden application ကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖျက်ရန်အိုင်ကွန်ဖို့လျှောက်လွှာဆွဲယူပါ။
လျှောက်လွှာအပြင်ဘက်ကဲ့သို့သောဖယ်ရှားရန်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်နှင့် Calculator ကို Vault အဆိုပါ Calculator ကို Vault အတွက်တူညီတဲ့ app ကိုမှ app ကိုဖွင့်မူရင်းဒေတာတွေကိုကူးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အန်းဒရွိုက် AOSP Calculator ကို source code ကို:
Apache ကိုလိုင်စင်, ဗားရှင်း 2.0
SwiftWifiStudio@gmail.com: သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကက e-mail ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
I / O စစ်ဆင်ရေးလျှော့ချခြင်းဖြင့် AppHider စတင်ဖွင့် -Speed
-Fix UI ကို bug တွေ
Whatsapp သို့မဟုတ် Facebook အသုံးပြု. dev အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ် -Add လင့်များ
တွစ်တာ -Fix ပြဿနာအလုပ်မလုပ်
Calculator ကို Vault: App ကို Hider - Apps ကပ Hide
6.93 ကို MB
နိုဝင်ဘာလ 17, 2019 မှာ 8: 25 နံနက်
calculator ကိုဖုံးပိတ် app nhi mil rha